I-Stroller Yokuhlanza Ama-Hacks Okudingeka Njalo Ngabazali - Umndeni
4 Stroller Yokuhlanza Hacks Lokho Wonke Umzali Okufanele Akwazi
4 Stroller Cleaning Hacks That Every Parent Should Know
Kuyinto eyodwa ukubuka ingane yakho izichithela yona. (Akukho okugeza, umthwalo wokuwasha kanye nokusula okumanzi okungakwazi ukukuxazulula, akunjalo?) Kungenye into ukumbona echitheka kulowo ohamba ngenqola, okwenze nje lokho wakhipha amakhulu amadola futhi manje embozwe i-sunscreen amabala nezimvuthu zikaCheddar Bunny. Ungesabi — lapha, izindlela ezinhle kakhulu zokuhlanza ngisho nobucwebe obukhulu bezinqola zabagibeli.
OKUSHIWO: I-Stroller Ehamba phambili Yazo Zonke Izidingo (neBhajethi)
fluxfactory / GettyImifanekiso
Umyalezo # 1: Amabala Esikrini Esilanga
Okudingayo: Ukuhlikihla utshwala, isixubho, ibhodlela lokufafaza, indwangu ehlanzekile
Wenzani: Nciphisa utshwala bokuzihlikihla ukuze kube ukuxubana okungu-50/50 namanzi. Bese uyiphonsa esikrinini selanga bese usebenzisa ibhulashi lamazinyo ukukhuhla ngobumnene bese ususa ibala. Uma ihambile, ungasebenzisa indwangu ehlanzekile ukuze uyisule okokugcina.
Umyalezo # 2: Amabala Okudla
Okudingayo: Insipho yesitsha (noma enye into yokuwasha), indwangu ehlanzekile
Wenzani: Faka inani elincane lensipho yezitsha endwangwini, bese ukhuhla kahle ibala, uhlanze ngamanzi lapho usuqedile. (Futhi, hlola ukubona ukuthi indwangu yokuhamba ngezinyawo iyasuswa futhi igezwe ngomshini — kwezinye izimo iyasuswa.)
Izithombe ze-Skynesher / Getty
I-Mess # 3: Imvuthuluka Kumisebenzi
Okudingayo: Ngokufanelekile, isikhala esingenantambo esinezinamathiseli ezingangena kuma-nook no-crannies angathandeki, amanzi nendwangu ehlanzekile
Wenzani: Khipha isihlalo esikhiphekayo bese usilungisa ukuze sibeke kahle. (Lokhu kuzokusiza ukuthi uthole indawo ephambili yokuncela izinsalela zokudla — njengamaCheerios — ezazisele emuva.) Ukususa noma yiluphi uthuli olusalayo, cwilisa indwangu ehlanzekile emanzini bese umane usule isihlalo.
i-webphotographer / i-Getty Izithombe
I-Mess # 4: Amasondo Angcolile
Okudingayo: Ukusula okumanzi, fafaza izinhloso zonke
Wenzani: Ku-pinch, ungasebenzisa ukusula okumanzi ukususa ukungcola-konke kusuka esihlabathini solwandle kuya kwinja yezinja. Kepha khumbula ukuthi amasondo amaningi abahamba ngezinyawo ayasuswa, futhi, ukuze ukwazi ukuwanika futhi ubanikeze isifutho-phansi ngesifutho sokuhlanza esenzelwe yonke inhloso.
OKUSHIWO: Amaqhinga Amancane Wokwenza Ingane Yakho Njengokuhlanza
izinzuzo zezempilo zama-apula aluhlaza
isinqa esikhulu emajini
ibhulashi lesisekelo elihle kakhulu lesisekelo samanzi
uhlu lwezincwadi ezikhuthazayo
indlela yokuvimbela izinwele ziwe ngokwemvelo